ReachEdge iji nyere ndị azụmaahịa mpaghara aka inweta ndị ahịa ọzọ | Martech Zone
Ulo oru obodo na-efunari ihe dika uzo ato n’ime uzo ha n’ihi ure n’ ahia na ahia ha. Ọbụna ma ọ bụrụ na ha nwere ihe ịga nke ọma na iru ndị na-azụ ahịa na ntanetị, ọtụtụ azụmaahịa enweghị ebe nrụọrụ weebụ wuru iji tọghata ndị ndu, esola ndu ngwa ngwa ma ọ bụ mgbe niile, ma amaghị nke isi ahịa ha na-arụ ọrụ.
Nweta, sistemụ ahịa agbakwunyere sitere na ReachLocal, na-enyere ndị azụmaahịa aka ihichapụ ọnya ahịa ndị a dị oke ọnụ ma mee ka ọtụtụ ndị ahịa site na olulu ahịa ha. Site na sistemụ a, azụmaahịa nwere ngwaọrụ na nkwado ha chọrọ iji nwetakwu ROI site na azụmaahịa ha.
Nweta na-eme ka usoro mgbasa ozi niile rụọ ọrụ atọ: ebe nrụọrụ weebụ dị mma, ngwanrọ njikwa njikwa, na ngwa mkpanaka dị ike nke na-arụkọ ọrụ ọnụ iji gbanwee atụmanya n'ime ndị ahịa.
Nweta sọftụwia na - enyere azụmaahịa mpaghara aka ijide ndu ndị ọzọ, gbanwee ha ka ha bụrụ ndị ahịa ma ghọta usoro aghụghọ azụmaahịa na --emepụta ọtụtụ ndị ahịa / ndị ahịa na ROI. Ya isi atụmatụ na-agụnye:
Duru na ịkpọ oku teknụzụ na captures edu site ahịa isi; dekọọ oku ma nye ndị azụmahịa ohere ịkpọghachi ha, nye ha ọnụego ma zaghachi ndu; emepụta ndepụta mbu nke na-echekwa nkọwa kọntaktị dị ka aha, adreesị ozi-e, ebe azụmahịa, nọmba ekwentị, ụbọchị na oge ịkpọ oku, na ịkpọ oku maka kọntaktị ọ bụla; na egwu nsonaazụ sitere na mgbasa ozi ReachLocal na ndị na-abụghị ReachLocal.
Ngwa mkpanaka na ịdọ aka ná ntị nke ahụ na-agwa ndị azụmaahịa oge ọ bụla ha nwetara kọntaktị ọhụrụ na saịtị ha; na-ahazi ma na-eso ụzọ na-eduga na mbara ala, ọfịs na / ma ọ bụ onye ọrụ; na-enye akụkọ nchịkọta ngwà gbasara ngwà ngwà ngwà na ọnụego itinye aka na ndu ọhụụ; na-enye ohere ka azụmaahịa lelee aha ụzọ nke mbu, melite ozi kọntaktị, gee oku edekọ ma were kọntaktị kọwaa n'ime otu; ma na-enye nhazi otu aka nke ọhụụ ọhụụ na-ebute ndu nurturing ozi ịntanetị na ọkwa ndị na-esochi ọrụ.
Idu ndu ma na-azụlite nke ahụ na-enye ọkwa (SMS na ngwa) iji chetara ndị nwe ụlọ ọrụ na ndị ọrụ ka ha soro ndu; a kwaa email kwa ụbọchị nke ndị ọhụrụ na kọntaktị na n'elu na-eduga; na usoro ozi ịntanetị na-akpaghị aka nke na-enyere ndị ahịa aka ịnọ n'ihu ụzọ ha.
Akụkọ ROI na nghọta nke na-enye nnweta 24/7 maka azụmaahịa site na ntanetị weebụ ha na ngwa mkpanaka; akụkọ na-egosi isi mmalite ahịa nke nleta, kọntaktị na ndu; usoro iheomume nke kọntaktị ọhụrụ niile, gụnyere mgbe a natara oku ekwentị ọ bụla, email ma ọ bụ ntinye akwụkwọ ntanetị; akụkọ na-ewu ewu na-egosi kpọmkwem ụbọchị na oge kọntaktị na-eme; njikọ aka na-egosi otú azụmaahịa si agbanwe kọntaktị ọhụrụ n'ime ndu na ndị ahịa; na atụmatụ ego ndị ahịa na-egosi azụmaahịa ahịa ha ROI.
Ndị ọkachamara n’ahịa banyere ReachLocal nke na-enye ntọala zuru oke nke ngwanrọ ReachEdge na ijikọ na weebụsaịtị nke azụmahịa; Mbido na nhazi nke ozi kọntaktị ọhụrụ na ọkwa ndị ọrụ; Mbido kọntaktị mmeghachi omume akpaaka ọhụrụ ma na-eduga nurturing ozi ịntanetị; na nyochaa akụkọ na nkwanye iji melite weebụsaịtị na arụmọrụ ahịa n'ịntanetị.
Ntugharị anyị iji mee ka ReachEdge dị maka weebụsaịtị ọ bụla bụ akụkụ nke atụmatụ ka ukwuu iji hụ na ịntanetị dị mfe ịnweta, nghọta na mfe maka azụmaahịa mpaghara. Sharon Rowlands, Onye isi ala, ReachLocal
ReachLocal, Inc. na enyere ndi ahia obodo aka itolite ma jiri oru ha aka nke oma site n’idu ndu ndi okacha amara na ndi okacha amara nye ndi n’eduba ha na ntughari ha. Isi ụlọ ọrụ ahụ dị na Woodland Hills, Calif. Ma na-arụ ọrụ na mpaghara anọ: Asia-Pacific, Europe, Latin America na North America.
Tags: akpakanamdenlekọta ahụikeọrụ ụlọinboundlocalazụmahịa obodoahia obodoMobile na Mbadamba ụrọmobile saịtị weebụọrụ ọkachamaratogoiruahia mpagharaọpụrụiche
Ihe Nlere Anya: Vidiyo na Mgbasa Ozi